November 14, 2020 – Voice of Myanmar
ဖားကန့်၊ နိုဝင်ဘာ-၁၄-၂၀၂၀ ဇော်မိုးထက်(VOM) ပြဿနာဖြစ်တာတွေကို ပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေသိအောင် တင်ပြရေးသားပေးရတဲ့ သတင်းထောက်တယောက်ဟာ အဲဒီပြဿနာတွေကိုရှင်းပေးရမယ့်တာဝန်ရှိသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာရောက်သွားရင် ဘာတွေကွာခြားသွားမလဲ ဘာအခဲတွေရှိလာနိုင်မယ်ထင်ပါသလဲ? အရင်က ဖားကန့်ကနေ သတင်းတွေရေးသားပေးပို့ခဲ့တဲ့ ကိုအောင်ဟိန်းမင်းဟာ ခုတော့ ဖားကန့်မြို့နယ်ရဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီကိုယ်စားပြု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းထောက်ဘဝနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဘဝ ဘာတွေကွာခြားသွားလဲ? သူဖားကန့်ပြည်သူတွေအတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ? လုပ်ပေးချင်တိုင်း လုပ်ပေးလို့ရော ရပါ့မလား? ဘာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနိုင်မလဲဆိုတာတွေကို VOM သတင်းထောက် ကိုဇော်မိုးထက်က ဖားကန့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အသစ်ဖြစ်လာတော့မယ့် ဦးအောင်ဟိန်းမင်းကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။ #voiceofmyanmar #VOM #ဖားကန့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် #ဦးအောင်ဟိန်းမင်း zawgy ျပႆနာရွိရင္သတင္းေရးသူဘဝမွ ျပႆနာရွင္းရမယ့္ေနရာေရာက္သြားသူ ဖားကန႔္၊ ႏိုဝင္ဘာ-၁၄-၂၀၂၀ ေဇာ္မိုးထက္(VOM) ျပႆနာျဖစ္တာေတြကို ျပည္သူနဲ႔သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြသိေအာင္ တင္ျပေရးသားေပးရတဲ့ သတင္းေထာက္တေယာက္ဟာ အဲဒီျပႆနာေတြကိုရွင္းေပးရမယ့္တာဝန္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာေရာက္သြားရင္ ဘာေတြကြာျခားသြားမလဲ ဘာအခဲေတြရွိလာႏိုင္မယ္ထင္ပါသလဲ? အရင္က ဖားကန႔္ကေန သတင္းေတြေရးသားေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ကိုေအာင္ဟိန္းမင္းဟာ ခုေတာ့ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကိုယ္စားျပဳ…
Interview, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက်, ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို, အင်တာဗျူးLeaveacomment
ရန်ကုန်မြို့က မြို့နယ်အချို့မှာ နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ကြေးငွေ ၄သောင်းမရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူစုလူဝေးဖြစ်ပွားခဲ့
ရန်ကုန်၊နိုဝင်ဘာ ၁၄၊၂၀၂၀ အေးချမ်းသူ(VOM) ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက လှိုင်သာယာမြို့နယ်နဲ့ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တို့မှာ နိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးငွေ ကျပ် ၄သောင်းမရရှိတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူစုလူဝေးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ လှိုင်သာယာအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊၂၀ရပ်ကွက်မှာ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက ထောက်ပံ့ကြေးလေးသောင်းမရရှိသူ လူဦးရေ ၁၅၀ခန့်က ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှေ့မှာ စုဝေးခဲ့တဲ့အတွက် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခဲ့ရတယ်လို့ အဲ့ဒီရပ်ကွက်မှာနေထိုင်သူ ကိုအောင်နိူင်က VOMကိုပြောပါတယ်။ “ထောက်ပံ့ကြေးမရတာက လူတိုင်းနီးပါးပါပဲ၊ အချို့က လေးကြိမ်ပေးတာ နှစ်ကြိမ်ရတာရှိတယ် လေးကြိမ်လုံးမရတာလည်း ရှိတယ်။ ရတာလည်းရှိတယ်”လို့ ကိုအောင်နိုင်ကပြောပါတယ်။ အခုလိုဖြစ်တဲ့ ကိစွနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြတ်မင်းသူကို VOMမှဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ အစည်းဝေးပြုလုပ်နေတဲ့အတွက် ပြီးမှပြန်လည်ဆက်သွယ်ပါလို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အလားတူ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ရွှေပေါက်ကံမြို့သစ်၊၂၂ရပ်ကွက်မှာ မနေ့နိုဝင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့က ထောက်ပံ့ကြေးလေးသောင်းမရတဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေဟာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကို သွားရောက်တင်ပြခဲ့ပေမယ့် အဆင်မပြေခဲ့ဘူးလို့ ၂၂ရပ် ကွက်မှာနေတဲ့ မသူဇာက VOMကိုပြောပါတယ်။ ” ညီမမြို့နယ်မှူးရုံးကိုသွားတော့ လူတွေအများကြီးပဲ၊ မြို့နယ်မှူးကမေးတယ် မရရင် အောက်ခြေမှာရှင်းတဲ့ အောက်ခြေမှာကျတော့ စာရင်းကမပါဘူး”လို့ မသူဇာကရှင်းပြပါတယ်။…
ကက်ရှ်မီးယားနယ်စပ်မှာ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန် အပြန်အလှန်ပစ်ခတ် လူ ၁၅ ဦးသေဆုံး
ဒေလီ၊ နိုဝင်ဘာ-၁၄-၂၀၂၀ မျိုးဆက်(VOM) အငြင်းပွားဖွယ်ကက်ရှ်မီးယားဒေသနယ်စပ်မှာ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်တပ်ဖွ့ဲဝင်တွေအကြား နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်က အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အရပ်သား ၁၀ ဦးနဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးသေဆုံးသွားပြီး နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နှစ်နိုင်ငံအကြား စစ်အင်အားအများအပြားချထား ပိုင်းခြားထားတဲ့ နယ်စပ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အသေအပျောက်အများဆုံး ဖြစ်စဉ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ ကက်ရှ်မီးယား မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ ပါကစ္စတန်ဘက်က စိမ့်ဝင်ထိုးဖောက်ဖို့ ကြိုးစားတာကို အိန္ဒိယတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက တားဆီးပြီးနောက် နယ်စပ်ထိန်းချုပ်ရေးမျဉ်း နေရာအချို့ကို မော်တာတွေ အခြားလက်နက်တွေနဲ့ တရစပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ အိန္ဒိယတာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ ပါကစ္စတန်ဘက်ကတော့ အိန္ဒိယစစ်တပ်ရဲ့ ကျူးကျော်ရန်စပြီး မဆင်မခြင်ပစ်ခတ်မှုတွေကို တုံ့ပြန်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရာမှာ ပြောဆိုထားပါတယ်။ ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် အိန္ဒိယဘက်မှာ အရပ်သားခြောက်ဦး ၊ စစ်သားသုံးဦးနဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ အိန္ဒိယတာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ ပါကစ္စတန်ဘက်မှာတော့ အရပ်သားလေးဦးနဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသေဆုံးသွာတယ်လို့…
မိခင်ကို မကြာခဏဂျီကျနေတဲ့ အကိုရင်းကို ညီအငယ်ဆုံးက ပေါက်တူးရိုးနဲ့ရိုက်သတ်
နိုဝင်ဘာ ၁၄-၂၀၂၀ ကောင်းလက်ျာ(VOM) ပဲခူးတိုင်း၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ ကျွဲပွဲမြို့၊ ဇီးဖြူသောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောင်းစုကျေးရွာ လယ်ကွက်ထဲက နေအိမ်တစ်အိမ်မှာ မနေ့နိုဝင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့ညပိုင်းက မိခင်ကို မကြာခဏ ဂျီလာကျတဲ့ အကိုရင်းဖြစ်သူကို မကျေနပ်တဲ့ ညီအငယ်ဆုံးက ပေါက်တူးရိုးနဲ့ရိုက်သတ်ခဲ့တယ်လို့ကျေးရွာရာအိမ်မှူး ဦးကြည်လွင်က ပြောပါတယ်။ ” မိခင်၊ဖခင်နဲ့ အတူနေတဲ့ အငယ်ဆုံးအိမ်မှာဖြစ်သွားတာပါ။ အမေကို မကြာခဏ လာဂျီကျနေလို့ တားရင်း ရန်ဖြစ်ကြရာက ပေါက်တူးရိုးနဲ့ ရိုက်သတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆေးရုံမှာ ကုသနေတုန်း ရရှိတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ သေဆုံးသွားတယ်”လို့ ဦးကြည်လွင်က ပြောပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူကို ဂျီလာကျတဲ့ အကိုအကြီးဆုံးဖြစ်သူ အသက်(၃၈ နှစ်)အရွယ်အမျိုးသားကို နေအိမ်ရှိ ညီအငယ်ဆုံးဖြစ်သူ အသက်(၂၂ နှစ်)အရွယ် အမျိုးသားက ပေါက်တူးရိုးနဲ့ ဦး‌ခေါင်းကိုရိုက်နှက်ရာကနေ ရရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ အုတ်တွင်းဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ကုသမှု ခံယူနေစဉ် သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကနဦးမှာတော့ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၂၆ နဲ့အမှုဖွင့်ထားရာ…
မဲရုံတာဝန်ကျ ဒု-မဲရုံမှူး ဆရာမတစ်ဦး Covid-19ပိုးတွေ့ရှိ ထိတွေ့သူ၂၁ ဦးကို ကွာရန်တင်းစင်တာပို့ထားရ
နိုဝင်ဘာ ၁၄-၂၀၂၀ ကောင်းလက်ျာ(VOM) ပဲခူးတိုင်း၊ ပဲခူးမြို့နယ်၊ မဇင်းရပ်ကွက် မဲရုံအမှတ်-၆မှာ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့က ဒု-မဲရုံးမှူး အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဆရာမ တစ်ဦး Covid-19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ ပြီး ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ ဆရာ၊ဆရာမ၂၁ ဦးကို ကွာရန်တင်းစင်တာတွေကိုပို့ဆောင်ပေးထားတယ်လို့မဇင်းရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်မင်းကပြောပါတယ်။ ” မနေ့ကညနေပိုင်းမှာ ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ မဲရုံးမှူးကတော့ ဒီရပ်ကွက်ထဲကဖြစ်ပြီး ပိုးတွေ့လူနာဆရာမက ပဲခူးမြို့‌ပေါ် ရပ်ကွက်တစ်ခုကပါ။ သူနဲ့ထိတွေ့သူ၂၁ ဦးလုံးကို ပရဟိတအဖွဲ့တွေပိုင်တဲ့ ကား ၇ စီးနဲ့ ကွာရန်တင်းစခန်းတွေပို့လိုက်ပြီ”လို့ ဦးအောင်မင်းကပြောပါတယ်။ ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်း နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့က Covid-19 ရောဂါပိုးတွေ့လူနာ ၁၉ ဦးရှိပြီး ပဲခူးတက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းရှိ ကုသဆောင်ကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ သကျနွယ်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့နဲ့ ပဲခူးမြို့နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေ သိရပါတယ်။ Covid-19 ပိုးတွေ့လူနာတွေကတော့ ပဲခူးဆေးရုံက (စောင့်ကြည့်လူနာ) အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား…
မင်းတုန်းမြို့နယ်မှာ အထောက်အထားမဲ့ဝင်လာသူ ၃၇ဦးတွေ့ရှိ
နိုဝင်ဘာ ၁၄-၂၀၂၀ ဂျန်ကိုးလ်(VOM) မကွေးတိုင်း၊ သရက်ခရိုင်၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ ဇွန်းကျကျေးရွာအနီးမှာ နိုင်ငံသားအထောက်အထားမဲ့သူ(၃၇)ဦးကို မနေ့ နိုဝင်ဘာ ၁၃ရက် ညနေပိုင်းက တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ ဇွန်းကျကျေးရွာကနေ သိရပါတယ်။ အထောက်အထားမဲ့သူတွေကို မဲဇလီကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းမှာ ကွာရန်တင်းထားရှိပြီး မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ လ.ဝ.ကတို့ပူးပေါင်းကာ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ”ရွာက ကလေးတွေဂိုင်းထောင်ထားတာလည်ရင်း သူတို့နဲ့သွားတိုးတာ၊ သူတို့က ထမင်းဆာတယ် ထမင်းကျွေးပါပေါ့၊ ဒီမှာထမင်းမရှိဘူး ရွာလိုက်ခဲ့ရင်တော့ရမယ်ဆိုလို့ သူတို့လိုက်လာတယ်၊ ရွာထဲတော့ အဝင်မခံဘူးပေါ့၊ ရွာနဲ့ တစ်ဖာလုံလောက်မှာ သူတို့ကိုထမင်းကျွေးပြီး အထက်သတင်းပို့ရတာပါ”လို့ ဇွန်းကျရွာခွဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးနိုင်ဦးကပြောပါတယ်။ ထွက်ပြေးလာကြတဲ့အထဲမှာ မင်းပြားမြို့နယ်ကမြန်မာကျောင်း ၄တန်းအောင်တဲ့အထိနေဘူးသူ ၁၄နှစ်အရွယ် မူဟာမတ်အက်ရဘန် ခေါ် မောင်သိန်းကျော်ပြောတာက”ရွာမှာက အစာရေစာပြတ်လပ်နေပြီ၊ ရခိုင်တွေနဲ့ရန်တိုက်ပေးနေတယ်၊ မလေးသွားဖို့လာတာပါ၊ သိန်း၄၀ပေးရပါတယ်၊ ပဲခူးတိုင်းရောက်ပြီဆိုပြီး ထားခဲ့တာပါ”လို့ ပြောပါတယ်။ အထောက်မထားမဲ့သူအများစုဟာ အသက်အရွယ်ငယ်သူတွေဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ခွဲအရွယ် ၊ ၁၂နှစ်၊…
သေဆုံးသူရဲ့ မဲလက်မှတ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံချက်အရ ကိုယ်စားပေးလို့ အမှုဖွင့်ခံရ
နိုဝင်ဘာ ၁၄ ၊ ၂၀၂၀ ကိုတိုးကြီး (VOM) စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့နယ် အရှေ့စည်းကျေးရွာရှိ ဆန္ဒမဲပေးရုံ အမှတ် (၁)မှာ သေဆုံးသူရဲ့ကိုယ်စား ဆန္ဒမဲပေးခဲ့တဲ့သူကို မနေ့နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်က ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်တိုင်တန်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ” အရှေ့စည်းရွာ နယ်မြေအမှတ် ၅ မှာနေတဲ့ ဒေါ်မပဲဟာ သေဆုံးသွားပြီးဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့သား ဦးစောမင်းလွင်ရဲ့ ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်ကိုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမောင်ထူးက မဲပေးဖို့ ထောက်ခံတာကြောင့် ဒေါ်မပဲက မဲသွားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ရွာက မဲစာရင်းမှာ သေဆုံးသူ ဦးစောမင်းလွင်ရဲ့ မဲစာရင်းအမှတ်က ၁၈၂၈ တော့ပါပြီး သူ့အမေ ဒေါ်မပဲရဲ့ မဲစာရင်းအမည်ကြတော့ မပါဘူးဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒါကြောင့် ဒေါ်မပဲက သေသွားတဲ့ သူ့သား မဲလက်မှတ်ကို သွားထည့်တာဖြစ်တယ်လို့ ” အရှေ့စည်းကျေးရွာကမဲဆန္ဒရှင် တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့…